ပီးလိုင်းကီးနဲ့ တွေ့ဆုံမြေးမန်းခြင်း| ပီးလိုငျးကီးနဲ့ တှဆေုံ့မွေးမနျးခွငျး။ - THE CHINLAND POST
ပီးလိုင်းကီးနဲ့ တွေ့ဆုံမြေးမန်းခြင်း| ပီးလိုငျးကီးနဲ့ တှဆေုံ့မွေးမနျးခွငျး။
ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး ဗဟိုကျောမီတီဝငျ၊ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးအမြိုးသမီးကျောမတီအတှငျးရငျးမှူး ပီး လိုငျးကီးနှငျ့ The Chinland Post တှဆေုံ့မွေးမနျးခွငျး။
၁။ မင်ျဂလာပါ။ ပထမဦးဆုံး ပွနျမိတျဆကျပေးလို့ရမလား။ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးအမြိုးသမီးကျောမတီမှာ ဘယျလိုပါဝငျနသေလဲဆိုတာ မိတျဆကျပေးနိုငျမလား
ပီးလိုငျးကီး- ကမြက ပီးလိုငျးကီးလို့ချေါတယျ။ CNF ရဲ့ ဗဟိုကျောမတီဝငျတယောကျဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ၂၀၁၈ခုနှဈမှာ CNF Women Committee ဖှဲ့စညျးပွီး အတှငျးရေးမှူးလုပျဖွဈတယျ။ လာလျမှာနိတျ ရှာအီး (ပီးသဲအီး)က ဥက်ကဌဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ ပွညျတှငျးမှာရှိတဲ့အဖှဲ့ဝငျနဲ့ခြိတျဆကျမယျ။ ပွီးရငျဌာန ခြုပျမှရှိတဲ့ ရဲမတှေေ၊ ရဲမဟေောငျးတှေ ပွီးရငျ ကမြတို့ရဲဘျောတှနှေငျ့ အမြိုးသမီးနဲ့ဆိုငျတဲ့လုပျငနျး တှလေုပျဖို့၊ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျကို ပိုပွီးအားကောငျးလာအောငျ အမြိုးသမီးတှပေိုပွီးပါဝငျလာနိုငျ အောငျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ဒီအဖှဲ့အစညျးကို ဖှဲ့စညျးတာဖွဈပါတယျလို့ ကမြအခု CNF မှာပဲ အလုပျ လုပျနတေယျလို့။
၂။ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးမှာ အမြိုးသမီးပါဝငျမှုအခွအေနနှေငျ့ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျသညျ့ အဆငျ့ အခနျးကဏ်ဍမှာကော ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးဆီက အမြိုးသမီးတှကေ ဘယျလို အခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျဆောငျရှကျနလေဲ?
ပီးလိုငျးကီး- ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးမှာ အမြိုးသမီးပါဝငျနှုနျးကတော့ အရမျးနညျးနသေေးတာပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ ကမြတို့ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးအနနေဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ၃၀% ပါဝငျလာရေးကိုလညျး အစိုကျမတျမတျ အရငျဆုံးတောငျးဆိုပွီးမှ ဒီ NCA စာခြုပျမှာ ပါနိုငျတဲ့အထိ ကွိုးစားလုပျဆောငျခဲ့တာကို ကွညျ့လို့ရှိရငျ အမြိုးသမီးတှကေို အရမျးကွိုဆိုတယျ အမြိုးသမီးသညျကိုပါဝငျစခေငျြတယျ လမျးဖှငျ့ ပေးထားတယျဆိုတာကို ကမြတို့ငွငျးလို့မရဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကမြတို့လကျရှိအနအေထားမှာတော့ ဗဟို ကျောမတီဝငျ ပါတီဖှဲ့ စညျးပုံအရဆိုရငျ ဗဟိုကျောမတီမှာ(၃)ဦးရှိတယျ။ အလုပျအမှုဆောငျ (CEC) မှာတော့ မရှိနိုငျသေးဘူး။ ဒီတပျပိုငျးဆိုငျရာမှာလညျး ရဲမတှေေ အမြားကွီးလိုအပျနသေေးတယျဆိုတာ ကိုတော့ ကမြတို့ ငွငျးလို့မရပါဘူး။ ပွီးတော့ နောကျတဈခုက ပွညျထောငျစုအဆငျ့မှာဆိုလို့ရှိရငျကမြ တို့ ခငျြးအမြိုးသား တပျဦးအနနေဲ့ တရားဝငျ ၂၁ရာစုပငျလုံ တကျနိုငျတာက အမြိုးသမီး (၂)ဦးပဲရှိပါသေးတယျ။ ဘာဖွဈ လို့လဲဆိုတော့ ဗဟိုကျောမတီအဆငျ့ပဲတကျနိုငျတဲ့အခါကွတော့ ကမြ နိုငျငံရေးကဏ်ဍမှာပါပါတယျ။ ဆရာမပီသဲအီးကတော့ မွယောနှငျ့ သဃံဇာတမှာပါပါတယျ။ ဒါဟာ CNF ရဲ့အခနျးကဏ်ဍအနနေဲ့ပေါ့။ ပွီးတော့ ဒီပွညျထောငျစုအဆငျ့မှာ ကမြတို့ပါဝငျနိုငျတဲ့အခနျးကဏ်ဍ အခုလကျရှိမှာပေါ့ ၂၀၁၈ထဲ Ethnic Armed Organizations_ Nationwide Ceasefire Agreement (EAOs-NCA) Peace Process Steering Team (PPST) ကဖှဲ့စညျးပေးလိုကျတဲ့ Women Leadership ဆိုတာ ကမြတို့အဖှဲ့ဖှဲ့ထားတာရှိပါတယျ။ အရငျတိုကျပှဲဝငျခဲ့တဲ့အမြိုးသမီးတှကေနေ ဦးဆောငျပွီးမှ EAOs Women Group အနနေဲ့ Workshop (၅)ကွိမျလုပျနိုငျခဲ့ပွီပေါ့နျော။ လုပျရတဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ ပွညျထောငျစု အဆငျ့မှာ အခုဖွဈနတေဲ့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ အမြိုးသမီးတှေ အဓိပ်ပါယျပွညျ့ဝစှာ ပါဝငျနိုငျဖို့အတှကျ ဒီခေါငျးဆောငျတှကေနဦေးဆောငျပွီး ကွိုးစားလုပျဆောငျနေ တာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတဲ့နရောမှာ လညျး အခုနောကျဆုံးအကွိမျ ကမြတို့ဒီလထဲမှာ လုပျသှားတဲ့ PPST အစညျးအဝေးမှာလညျး လားဟူ က ဆရာမနိုငျရငျစိုးကလညျး PPST Working Committee မှာ ဒုတိယဥက်ကဌနရော ရသှားတယျ။ ပွီးတော့ ကနျြတဲ့အဖှဲ့ထဲကနမှေ အလှညျ့ကပြေါ့နျော။ PPST meeting ဆိုတာကလညျး EAOs တှရေဲ့ထိပျသီး အစညျးအဝေးပဲပေါ့ ဒီထကျမွငျ့တဲ့အစညျးအဝေးဆိုတာမရှိ ဒီမြိုးမှာလညျးအမြိုးသမီးတှေ ပါဝငျနိုငျမညျ့လမျးကွောငျးပျေါလာတယျ။ ကမြတို့ လလေ့ာသူအနေ နဲ့လညျး သှားပွီးခါမှသူတို့ပါဝငျခှငျ့ပေးတာ လညျးတှရေ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အခငျးအကငျြးကို ကွညျ့မယျဆိုလို့ရှိရငျ decision making top leader ပိုငျးမှာ အမြိုးသမီးသညျရဲ့အသံပေါ့ အခုလကျရှိအနအေထားကို ကွညျ့မယျဆိုရငျအမြိုးသမီးတဈဦး ထဲပဲရှိတယျပေါ့။ သူ့ကိုပိုပွီးမှ အမြိုးသမီးအခငျြးခငျြးဆိုရငျ ပိုပွီးမှဆှေးနှေးရတာ ပွီးရငျပံ့ပိုးရတာ supporting လုပျရတာ ပိုပွီးအဆငျ ပွတေယျ။ ရခိုငျက ဆရာမစောမွရာဇာလငျးတဈယောကျထဲပဲ အခုလကျရှိ PPST မှာ ရှိနသေေးတဲ့ အနအေထားမြိုးဖွဈတယျ။ ဒီလိုမြိုးကိုလညျး အမြိုးသမီးသညျ ကိုယျ့ရဲ့ EAOs အစုအဖှဲ့အသီးသီး ကနသေျောလညျးကောငျး ဒီပွညျထောငျစုအဆငျ့မှာသျောလညျးကောငျး ဒီNCA လကျမှတျရေး ထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့သညျအနနေဲ့ ကမြတို့အမြိုးသမီးသညျပါဝငျနိုငျမှုကို အတတျနိုငျဆုံး ကိုယျတိုငျက ကွိုးစားပွီးမှ ရှာဖှကွေတယျ၊ ပါဝငျနိုငျအောငျလညျး ကွိုးစားကွတယျ။ EAOs ခေါငျးဆောငျကိုယျတိုငျက လညျး တိုငျရငျးသားသညျကတော့ အခုလကျရှိအခငျးအကငျြးအရတော့ အမြိုးသမီးတှပေါဝငျလာ နိုငျဖို့ကို တျောတျောလေးလမျးလညျးဖှငျ့ထားတယျ ကွိုးကွိုးစားစား လေးနဲ့ပေါ့နျော သူတို့လညျး တှဲ ချေါနတေယျဆိုတာကမြပွောခငျြတယျ။
၃။ အမြိုးသမီးတှမှောတော့ နိုငျငံရေး၊ ဒသေန်ဒရအုပျခြုပျရေး၊ ရှေးကောကျပှဲမှာ အမြိုးသမီးတှမေပါဝငျသေးတာ ဘာကွောငျ့မြားဖွဈနိုငျသလဲ သိခငျြပါတယျ။
ပီးလိုငျးကီး- ကမြရဲ့တဦးတညျးသုံးသပျခကျြအရပေါ့လေ ကမြတို့ရဲ့ ဒီပွညျတှငျးမငွိမျးခမျြးခွငျးရဲ့ အသီးအပှငျ့လို့ပဲ ကမြတော့ ခေါငျးစဉျတပျခငျြတယျလေ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကမြတို့မွနျမာနိုငျငံ က ဆငျးရဲတာလညျးပါတယျ။ လူမှုဘဝမဖူလုံတာလညျးပါတယျပေါ့နျော။ လိုအပျခကျြတှေ အရမျးမြား နတေဲ့အခါ မိသားစုတဈခုမှာက မိခငျကအခရာသှားကတြယျပေါ့။ ပွီးတော့ အမြိုးသမီးတဈယောကျက သူပညာ တတျလာတယျ သူဘှဲ့ရလာတယျဆိုလို့ရှိရငျလညျး လစာရတဲ့အလုပျမြိုးဒီလိုမြိုး ဝနျထမျး NGO မလုပျ သညျ့တိုငျအောငျ ဝငျငှရှေိတဲ့လုပျငနျးမြိုး ဒီလိုမြိုးကိုယျ့ရဲ့နစေဉျ စားဝတျနရေေးဖူလှုံရေး မြိုးမှာပဲ အရမျး အာရုံစိုကျတဲ့အခါကွတော့လညျး ဒီနိုငျငံရေးပိုငျးမှာကွတော့ အာရုံမစိုကျနိုငျဘူးလို့ ကမြအနနေဲ့သုံးသပျခငျြတယျ။ ပွီးတော့ တဈဖကျကစဉျးစားကွညျ့မယျဆိုလို့ရှိရငျလညျး အာရုံစိုကျမယျ ဆိုပွနျတော့လညျး ကမြတို့ရဲ့လကျရှိပွညျတှငျး အနအေထား တိုငျးရငျးသားဒသေမှာသျောလညျး ကောငျး ဒီပွညျတှငျးထဲမှာသျောလညျးကောငျးပေါ့ ကမြတို့ရဲ့ ရိုးရာယဉျကြေးမှုထုံးတိုငျးစဉျလာအရ တိုငျးရငျးသားတိုငျးမှာရှိတယျ ဒါဟာပွညျတှငျးမှာရှိတယျ အမြိုးသမီးဟာ နိုငျငံရေးမှာပါဝငျတယျ အခု ကမြတို့ဆိုလို့ရှိရငျ ဒီတျောလှနျရေးအဖှဲ့အစညျးထဲလိုပဲ ပွောမယျပေါ့ ဒါဟာ NCA လကျမှတျထိုးပွီးမှ ကမြတို့ပါဝငျတာတောငျမှ အခကျအခဲသညျရှိတယျပေါ့နျော လူတှရေဲ့ဝဖေနျသုံးသပျတာတှေ ပွီးရငျ အနှောကျအယှကျ၊ အဟနျ့အတား အခကျအခဲဆိုတာအမြားကွီးစိနျချေါမှုသညျက ကမြအမြားကွီး စိနျချေါမှုမြားစှာက ကမြတို့ကိုကွိုနသေလိုမြိုးခံရတယျ။ ဒီလိုမြိုးအခြိနျမှာပေါ့နျော အမြိုးသမီးအခငျြး ခငျြးအား ပေးတတျဖို့ ဆိုတာလညျးလိုတယျ။ ဥပမာကမြ အခုလကျရှိပွညျတှငျးမှာဆိုလို့ရှိရငျ CSO တှေ လညျးရှိတယျ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျး အမြိုးသမီးသညျရှိတယျ။ ကမြတို့ခငျြးပွညျနယျမှာဆိုရငျလညျး ခငျြးပွညျနယျ မွို့နယျတိုငျးမှာ အမြိုးသမီးအဖှဲ့တှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ သို့သျောငွားလညျးပဲ သူတို့ ကြားမတနျး တူရေးတို့ women rights တို့စသညျဖွဈ သူတို့မြှဝမှေု(sharing)သညျ လုပျနတေဲ့ အခနျး ကဏ်ဍသညျ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျ(peace process)နှငျ့ အမြိုးသမီးခေါငျးစဉျ၊ ဒါမှမဟုတျလို့ရှိရငျ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ မွယောစသဖွငျ့ ခေါငျးစဉျအမြားကွီးနဲ့ သူတို့အလုပျလုပျတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ ငွိမျးခမျြးရေးထဲမှာပေါ့နျော ကွိုးစားပမျးစားနဲ့ပါဝငျနတေဲ့အမြိုးသမီးအခငျြးခငျြးကွတော့လညျး မခြိတျ ဆကျကွဘူး ဒါကမြအမွငျ ဒါအရိုးသားဆုံးကမြမွငျတာပေါ့။ အဲလိုမြိုးသညျလညျးရှိတဲ့အခါကွတော့ ဒါသူ့အလုပျသူလုပျနတောပဲ ဒီအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆိုလို့ရှိရငျ အျောသူတို့က တျောလှနျရေးအဖှဲ့အစညျး ပဲပေါ့နျော ဒါဥပဒနေဲ့ မကငျးဘူးလားစသဖွငျ့ စိုးရငျစိတျကွောကျစိတျသညျက ကမြတို့အမြိုးသမီး စိတျထဲမှာ ရှိနသေေးတယျ။ အလုပျတဈခုခုလုပျတော့မယျဆို ပွတျသားဖို့လိုတယျ၊ သတ်တိရှိဖို့လိုတယျ ကိုယျ့ဟာနဲ့ကိုယျလညျး ယုံကွညျမှုရှိဖို့လိုတယျ။
၄။ ငွိမျးခမျြးရေးမှာ အမြိုးသမီးတှပေါဝငျလာဖို့အတှကျ ဘယျလိုအပွောငျးလဲမှုတှလေုပျသငျ့ပါသလဲ?
ပွီးတော့ ကိုယျကိုယျနှိကျကိုက အရငျဆုံးပွောငျးလဲဖို့လိုတယျ။ ကမြအမွဲတိုငျးပွောတယျ။ ကိုယျကိုယျနှကျပွောငျးလဲမှ ကမြပါဝငျနိုငျမှုနှုနျးလညျးမွငျ့ တကျလာမယျ။ အုပျခြုပျမှူးတှသေူတို့ရှေး တယျပေါ့နျော မွို့နယျတှေ ရပျရှာတှေ၊ စညျပငျလညျး ရှေးတယျ။ ဒီလိုမြိုးမှာ ကွတော့ အမြိုးသမီးတှေ ကလညျး မထှကျလာတော့ဘူး ကမြလကျရှိမွငျ နရေတာကတဈခုက ပါတီသညျ ၂၀၂၀ရှေးကောကျပှဲ လာတော့မယျ ပါတီတိုငျးက အမြိုးသမီးကို လလေ့ာတယျလေ ဘယျအမြိုးသမီးက ဘယျမွို့နယျမှာ ဘယျနှဈယောကျထှကျလာနိုငျမလဲဆိုတာ အမြိုးသမီးအခှငျ့ အရေးကတော့ပွောနကွေတယျ၊ လုပျနေ ကွတယျ၊ အျောနကွေတယျ၊ ကွိုးစားနကွေတယျ၊ အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရတယျ နညျးမြိုးစုံပေါ့ လူမှုရေးကိုလုပျနကွေသျောငွားလညျးပဲ တကယျ့တှမှောပေါ့နျော decision maker ရောကျမယျ့ အနအေထားလိုမြိုးမှာ ကမြတို့အမြိုးသမီးတှကေ ထှကျမလာဘူး။ ဆိုတော့ဘာကိုခကျခဲလဲ။ ကိုယျ့ကိုယျလညျးကိုယျမေးတယျ။ ဘာကခကျခဲ နလေညျးဆိုတော့ အဓိကကိုယျ့ကိုယျကို အရငျပွောငျး လဲပါလို့။ အဲဒါပဲ။ ကိုယျ့ကိုယျကို အရငျပွောငျးလဲဖို့၊ သတ်တိရှိဖို့ အဲဒါကိုပဲ အဲဒါကွောငျ့မလို့ဆိုပွီး ကမြတော့ ပွောခငျြတယျ။
၅။ အမြိုးသမီးအနနေဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမှာ ပါဝငျလုပျကိုငျနတေော့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျး ကွားမှာ ခှဲခွားဆကျဆံရတာတှခေံခဲ့ဖူးသလား။
ပီးလိုငျးကီး- ရှိပါတယျ။ ဒါကတော့။ အမြားကွီးပဲရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျးကွတော့ Peace process ဖွဈနကောလ နှဈနှဈသုံးနှဈလေးနှဈမွောကျရှိလာပွီ NCA နှဈပတျလညျတှေ ဖွဈလာပွီး ဆိုတော့လေ အခုတော့ အနအေထားကနေ နညျးနညျးတော့ ကြျောလှနျလာတယျ နညျးနညျးတော့ တံခါးဖှငျ့လာတယျလို့ ကမြခံစားတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ မွနျမာပွညျ အမြိုးသမီးအဖှဲ့ခြုပျ ဆိုလို့ ရှိရငျ ငွိမျးခမျြးရေးဖိုရမျတှလေုပျလို့ရှိရငျလညျး EAOs ထဲက အမြိုးသမီးတှကေို တဈဖှဲ့ကတဈယောကျ ဖိတျတဲ့ဟာလသေညျ၊ တဈခြို့Peace Forum လုပျတဲ့ CSO တှလေုပျရငျလညျးပါဝငျဖို့ဆိုတဲ့ဟာ မြိုးသညျ အခြိတျအဆကျကတော့ မိလာကွပါပွီ အရငျကထကျစာလို့ရှိရငျအမြားကွီးပဲ။ အရငျကတော့ ကွောကျတာပေါ့။ ကိုယျကလူမှုအဖှဲ့အစညျးတဈခုကနတေကျလာတယျဖွဈခဲ့ရငျတောငျမှကိုယျက တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးထဲမှပါတော့ သူတို့ရဲ့အမွငျက တဈမြိုးကွီးဖွဈသှားပွီးလဲ။ သူတို့ရဲ့ဝဖေနျသုံးသပျမှုကတဈမြိုးကွီးဖွဈသှားတယျ။ သူလညျးသူ့ပေါလစီနဲ့သူသှားတယျ။ ကိုယျ လညျး ကိုယျ့ပျေါလစီနဲ့ကိုယျသှားတယျဆိုတဲ့အနအေထားလိုမြိုးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ၊ အရငျကတော့ ရငျခုနျသံထပျတူပမေယျ့ ရငျခုနျသံကနညျးနညျးအလှမျးဝေးကှာသှားတဲ့ဟာမြိုးလေး သညျပေါ့။ ကမြအမြားကွီးကွုံခဲ့ပါတယျလို့။
၆။့ကွညျ့ရှုအားပေးနသေညျ့ အမြိုးသမီးမြားကို ဘာမြားမှာခငျြပါသလဲ။
ပီးလိုငျးကီး- ခငျြးပွညျနယျအရပျရပျမှာရှိတဲ့အမြိုးသမီးအားလုံးကိုပေါ့လေ ကမြအားပေးခငျြပါတယျလို့။ ကိုယျကြ တဲ့ကဏ်ဍ၊ ကိုယျပါဝငျပတျသကျနတေဲ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးမှာ ဇှဲလြှော့လုံလဝိရိယလြှော့တာ မြိုး အားငယျတာမြိုး ကိုယျ့ကိုယျသိမျငယျတာမြိုး စိတျဓါတျသညျမမှေးစဘေူးလို့။ အားတငျးထားပါ။ ကမြတို့ခငျြးအမြိုးသမီးတှဟော နိုငျငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေးကဏ်ဍတိုငျးမှာ ခငျြးအမြိုးသမီးတှေ လညျး ခေါငျးဆောငျကောငျးအမြားကွီး ပျေါထှနျးလာနိုငျအောငျကွိုးစားကွရအောငျ ကမြအနနေဲ့ မှာခငျြပါ တယျ။
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ဗဟိုကော်မီတီဝင်၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအမျိုးသမီးကော်မတီအတွင်းရင်းမှူး ပီး လိုင်းကီးနှင့် The Chinland Post တွေ့ဆုံမြေးမန်းခြင်း။
၁။ မင်္ဂလာပါ။ ပထမဦးဆုံး ပြန်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမလား။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအမျိုးသမီးကော်မတီမှာ ဘယ်လိုပါဝင်နေသလဲဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မလား
ပီးလိုင်းကီး- ကျမက ပီးလိုင်းကီးလို့ခေါ်တယ်။ CNF ရဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ CNF Women Committee ဖွဲ့စည်းပြီး အတွင်းရေးမှူးလုပ်ဖြစ်တယ်။ လာလ်မှာနိတ် ရွာအီး (ပီးသဲအီး)က ဥက္ကဌဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်။ ပြီးရင်ဌာန ချုပ်မှရှိတဲ့ ရဲမေတွေ၊ ရဲမေဟောင်းတွေ ပြီးရင် ကျမတို့ရဲဘော်တွေနှင့် အမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်း တွေလုပ်ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ပိုပြီးအားကောင်းလာအောင် အမျိုးသမီးတွေပိုပြီးပါဝင်လာနိုင် အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ ကျမအခု CNF မှာပဲ အလုပ် လုပ်နေတယ်လို့။
၂။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအခြေအနေနှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သည့် အဆင့် အခန်းကဏ္ဍမှာကော ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးဆီက အမျိုးသမီးတွေက ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေလဲ?
ပီးလိုင်းကီး- ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်နှုန်းကတော့ အရမ်းနည်းနေသေးတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ၃၀% ပါဝင်လာရေးကိုလည်း အစိုက်မတ်မတ် အရင်ဆုံးတောင်းဆိုပြီးမှ ဒီ NCA စာချုပ်မှာ ပါနိုင်တဲ့အထိ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့တာကို ကြည့်လို့ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေကို အရမ်းကြိုဆိုတယ် အမျိုးသမီးသည်ကိုပါဝင်စေချင်တယ် လမ်းဖွင့် ပေးထားတယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ငြင်းလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ဗဟို ကော်မတီဝင် ပါတီဖွဲ့ စည်းပုံအရဆိုရင် ဗဟိုကော်မတီမှာ(၃)ဦးရှိတယ်။ အလုပ်အမှုဆောင် (CEC) မှာတော့ မရှိနိုင်သေးဘူး။ ဒီတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ရဲမေတွေ အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ကျမတို့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ တို့ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦးအနေနဲ့ တရားဝင် ၂၁ရာစုပင်လုံ တက်နိုင်တာက အမျိုးသမီး (၂)ဦးပဲရှိပါသေးတယ်။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ ဗဟိုကော်မတီအဆင့်ပဲတက်နိုင်တဲ့အခါကြတော့ ကျမ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာပါပါတယ်။ ဆရာမပီသဲအီးကတော့ မြေယာနှင့် သဃံဇာတမှာပါပါတယ်။ ဒါဟာ CNF ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပေါ့။ ပြီးတော့ ဒီပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ကျမတို့ပါဝင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍ အခုလက်ရှိမှာပေါ့ ၂၀၁၈ထဲ Ethnic Armed Organizations_ Nationwide Ceasefire Agreement (EAOs-NCA) Peace Process Steering Team (PPST) ကဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တဲ့ Women Leadership ဆိုတာ ကျမတို့အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်။ အရင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကနေ ဦးဆောင်ပြီးမှ EAOs Women Group အနေနဲ့ Workshop (၅)ကြိမ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြည်ထောင်စု အဆင့်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီခေါင်းဆောင်တွေကနေဦးဆောင်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာ လည်း အခုနောက်ဆုံးအကြိမ် ကျမတို့ဒီလထဲမှာ လုပ်သွားတဲ့ PPST အစည်းအဝေးမှာလည်း လားဟူ က ဆရာမနိုင်ရင်စိုးကလည်း PPST Working Committee မှာ ဒုတိယဥက္ကဌနေရာ ရသွားတယ်။ ပြီးတော့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ထဲကနေမှ အလှည့်ကျပေါ့နော်။ PPST meeting ဆိုတာကလည်း EAOs တွေရဲ့ထိပ်သီး အစည်းအဝေးပဲပေါ့ ဒီထက်မြင့်တဲ့အစည်းအဝေးဆိုတာမရှိ ဒီမျိုးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်နိုင်မည့်လမ်းကြောင်းပေါ်လာတယ်။ ကျမတို့ လေ့လာသူအနေ နဲ့လည်း သွားပြီးခါမှသူတို့ပါဝင်ခွင့်ပေးတာ လည်းတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခင်းအကျင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် decision making top leader ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးသည်ရဲ့အသံပေါ့ အခုလက်ရှိအနေအထားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထဲပဲရှိတယ်ပေါ့။ သူ့ကိုပိုပြီးမှ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းဆိုရင် ပိုပြီးမှဆွေးနွေးရတာ ပြီးရင်ပံ့ပိုးရတာ supporting လုပ်ရတာ ပိုပြီးအဆင် ပြေတယ်။ ရခိုင်က ဆရာမစောမြရာဇာလင်းတစ်ယောက်ထဲပဲ အခုလက်ရှိ PPST မှာ ရှိနေသေးတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမျိုးကိုလည်း အမျိုးသမီးသည် ကိုယ့်ရဲ့ EAOs အစုအဖွဲ့အသီးသီး ကနေသော်လည်းကောင်း ဒီပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာသော်လည်းကောင်း ဒီNCA လက်မှတ်ရေး ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့သည်အနေနဲ့ ကျမတို့အမျိုးသမီးသည်ပါဝင်နိုင်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားပြီးမှ ရှာဖွေကြတယ်၊ ပါဝင်နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားကြတယ်။ EAOs ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်က လည်း တိုင်ရင်းသားသည်ကတော့ အခုလက်ရှိအခင်းအကျင်းအရတော့ အမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာ နိုင်ဖို့ကို တော်တော်လေးလမ်းလည်းဖွင့်ထားတယ် ကြိုးကြိုးစားစား လေးနဲ့ပေါ့နော် သူတို့လည်း တွဲ ခေါ်နေတယ်ဆိုတာကျမပြောချင်တယ်။
၃။ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ နိုင်ငံရေး၊ ဒေသန္ဒရအုပ်ချုပ်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသမီးတွေမပါဝင်သေးတာ ဘာကြောင့်များဖြစ်နိုင်သလဲ သိချင်ပါတယ်။
ပီးလိုင်းကီး- ကျမရဲ့တဦးတည်းသုံးသပ်ချက်အရပေါ့လေ ကျမတို့ရဲ့ ဒီပြည်တွင်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ အသီးအပွင့်လို့ပဲ ကျမတော့ ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်တယ်လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံ က ဆင်းရဲတာလည်းပါတယ်။ လူမှုဘ၀မဖူလုံတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ လိုအပ်ချက်တွေ အရမ်းများ နေတဲ့အခါ မိသားစုတစ်ခုမှာက မိခင်ကအခရာသွားကျတယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူပညာ တတ်လာတယ် သူဘွဲ့ရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း လစာရတဲ့အလုပ်မျိုးဒီလိုမျိုး ၀န်ထမ်း NGO မလုပ် သည့်တိုင်အောင် ၀င်ငွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းမျိုး ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နေစဉ် စားဝတ်နေရေးဖူလှုံရေး မျိုးမှာပဲ အရမ်း အာရုံစိုက်တဲ့အခါကြတော့လည်း ဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာကြတော့ အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူးလို့ ကျမအနေနဲ့သုံးသပ်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း အာရုံစိုက်မယ် ဆိုပြန်တော့လည်း ကျမတို့ရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်း အနေအထား တိုင်းရင်းသားဒေသမှာသော်လည်း ကောင်း ဒီပြည်တွင်းထဲမှာသော်လည်းကောင်းပေါ့ ကျမတို့ရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထုံးတိုင်းစဉ်လာအရ တိုင်းရင်းသားတိုင်းမှာရှိတယ် ဒါဟာပြည်တွင်းမှာရှိတယ် အမျိုးသမီးဟာ နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်တယ် အခု ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင် ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းထဲလိုပဲ ပြောမယ်ပေါ့ ဒါဟာ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ကျမတို့ပါဝင်တာတောင်မှ အခက်အခဲသည်ရှိတယ်ပေါ့နော် လူတွေရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေ ပြီးရင် အနှောက်အယှက်၊ အဟန့်အတား အခက်အခဲဆိုတာအများကြီးစိန်ခေါ်မှုသည်က ကျမအများကြီး စိန်ခေါ်မှုများစွာက ကျမတို့ကိုကြိုနေသလိုမျိုးခံရတယ်။ ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာပေါ့နော် အမျိုးသမီးအချင်း ချင်းအား ပေးတတ်ဖို့ ဆိုတာလည်းလိုတယ်။ ဥပမာကျမ အခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် CSO တွေ လည်းရှိတယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း အမျိုးသမီးသည်ရှိတယ်။ ကျမတို့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ်တိုင်းမှာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ အများကြီးရှိတယ်။ သို့သော်ငြားလည်းပဲ သူတို့ ကျားမတန်း တူရေးတို့ women rights တို့စသည်ဖြစ် သူတို့မျှဝေမှု(sharing)သည် လုပ်နေတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်(peace process)နှင့် အမျိုးသမီးခေါင်းစဉ်၊ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် မြေယာစသဖြင့် ခေါင်းစဉ်အများကြီးနဲ့ သူတို့အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးထဲမှာပေါ့နော် ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းကြတော့လည်း မချိတ် ဆက်ကြဘူး ဒါကျမအမြင် ဒါအရိုးသားဆုံးကျမမြင်တာပေါ့။ အဲလိုမျိုးသည်လည်းရှိတဲ့အခါကြတော့ ဒါသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲ ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် အော်သူတို့က တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ပဲပေါ့နော် ဒါဥပဒေနဲ့ မကင်းဘူးလားစသဖြင့် စိုးရင်စိတ်ကြောက်စိတ်သည်က ကျမတို့အမျိုးသမီး စိတ်ထဲမှာ ရှိနေသေးတယ်။ အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆို ပြတ်သားဖို့လိုတယ်၊ သတ္တိရှိဖို့လိုတယ် ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်။
၄။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာဖို့အတွက် ဘယ်လိုအပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်သင့်ပါသလဲ?
ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်နှိက်ကိုက အရင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ ကျမအမြဲတိုင်းပြောတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်နှက်ပြောင်းလဲမှ ကျမပါဝင်နိုင်မှုနှုန်းလည်းမြင့် တက်လာမယ်။ အုပ်ချုပ်မှူးတွေသူတို့ရွေး တယ်ပေါ့နော် မြို့နယ်တွေ ရပ်ရွာတွေ၊ စည်ပင်လည်း ရွေးတယ်။ ဒီလိုမျိုးမှာ ကြတော့ အမျိုးသမီးတွေ ကလည်း မထွက်လာတော့ဘူး ကျမလက်ရှိမြင် နေရတာကတစ်ခုက ပါတီသည် ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲ လာတော့မယ် ပါတီတိုင်းက အမျိုးသမီးကို လေ့လာတယ်လေ ဘယ်အမျိုးသမီးက ဘယ်မြို့နယ်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ထွက်လာနိုင်မလဲဆိုတာ အမျိုးသမီးအခွင့် အရေးကတော့ပြောနေကြတယ်၊ လုပ်နေ ကြတယ်၊ အော်နေကြတယ်၊ ကြိုးစားနေကြတယ်၊ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတယ် နည်းမျိုးစုံပေါ့ လူမှုရေးကိုလုပ်နေကြသော်ငြားလည်းပဲ တကယ့်တွေမှာပေါ့နော် decision maker ရောက်မယ့် အနေအထားလိုမျိုးမှာ ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေက ထွက်မလာဘူး။ ဆိုတော့ဘာကိုခက်ခဲလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်မေးတယ်။ ဘာကခက်ခဲ နေလည်းဆိုတော့ အဓိကကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ပြောင်း လဲပါလို့။ အဲဒါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ပြောင်းလဲဖို့၊ သတ္တိရှိဖို့ အဲဒါကိုပဲ အဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုပြီး ကျမတော့ ပြောချင်တယ်။
၅။ အမျိုးသမီးအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတော့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း ကြားမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံရတာတွေခံခဲ့ဖူးသလား။
ပီးလိုင်းကီး- ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့။ အများကြီးပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ Peace process ဖြစ်နေကာလ နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်မြောက်ရှိလာပြီ NCA နှစ်ပတ်လည်တွေ ဖြစ်လာပြီး ဆိုတော့လေ အခုတော့ အနေအထားကနေ နည်းနည်းတော့ ကျော်လွန်လာတယ် နည်းနည်းတော့ တံခါးဖွင့်လာတယ်လို့ ကျမခံစားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် ဆိုလို့ ရှိရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်လည်း EAOs ထဲက အမျိုးသမီးတွေကို တစ်ဖွဲ့ကတစ်ယောက် ဖိတ်တဲ့ဟာလေသည်၊ တစ်ချို့Peace Forum လုပ်တဲ့ CSO တွေလုပ်ရင်လည်းပါဝင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာ မျိုးသည် အချိတ်အဆက်ကတော့ မိလာကြပါပြီ အရင်ကထက်စာလို့ရှိရင်အများကြီးပဲ။ အရင်ကတော့ ကြောက်တာပေါ့။ ကိုယ်ကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေတက်လာတယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှကိုယ်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှပါတော့ သူတို့ရဲ့အမြင်က တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီးလဲ။ သူတို့ရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုကတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ သူလည်းသူ့ပေါလစီနဲ့သူသွားတယ်။ ကိုယ် လည်း ကိုယ့်ပေါ်လစီနဲ့ကိုယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလိုမျိုးမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်၊ အရင်ကတော့ ရင်ခုန်သံထပ်တူပေမယ့် ရင်ခုန်သံကနည်းနည်းအလှမ်းဝေးကွာသွားတဲ့ဟာမျိုးလေး သည်ပေါ့။ ကျမအများကြီးကြုံခဲ့ပါတယ်လို့။
၆။့  ကြည့်ရှုအားပေးနေသည့် အမျိုးသမီးများကို ဘာများမှာချင်ပါသလဲ။
ပီးလိုင်းကီး- ချင်းပြည်နယ်အရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုပေါ့လေ ကျမအားပေးချင်ပါတယ်လို့။ ကိုယ်ကျ တဲ့ကဏ္ဍ၊ ကိုယ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဇွဲလျှော့လုံလ၀ိရိယလျှော့တာ မျိုး အားငယ်တာမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်သိမ်ငယ်တာမျိုး စိတ်ဓါတ်သည်မမွှေးစေဘူးလို့။ အားတင်းထားပါ။ ကျမတို့ချင်းအမျိုးသမီးတွေဟာ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍတိုင်းမှာ ချင်းအမျိုးသမီးတွေ လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းအများကြီး ပေါ်ထွန်းလာနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရအောင် ကျမအနေနဲ့ မှာချင်ပါ တယ်။
Previous Malaysia In A Tlung Mi Hakha Nu Telh In Minung6COVID-19 Zawtnak Hrik An Ngei Lo Tiah Ngandamnak Zung Nih Thawngthanhnak A Tuah
Next Pi Lalhmangaihzuali Interview on Women Participation in Peace Process